18 IBHOKISI YEKHADI LOMTSHATO IINGCAMANGO ONOKUZITHENGA OKANYE I-DIY - UKWAMKELWA KOMSITHO
Eyona Ukwamkelwa Komsitho 18 Ibhokisi yamakhadi oMtshato weKhadi oLungele ukuLwamkela kwakho
Ibhokisi lekhadi lomtshato elimnandi yindlela engalindelekanga yokubonisa ubuntu emtshatweni wakho.
Ukuhlaziywa kweNov 23, 2020 Sifake iimveliso zomntu wesithathu ukukunceda uhambe kwaye wonwabele awona maxesha makhulu obomi. Ukuthengwa okwenziwe ngekhonkco kweli phepha kungasifumana ikhomishini.
Ngelixa ezinye iindwendwe ziza kukuthumela imeyile izipho zomtshato , Abanye banokukhetha ukubazisa kumtshato wakho. Oko kuthetha ukuba uyakufuna ukuseta indawo entle yokuba bashiye ubhaliso lwakho kwaye Imali yokubuyisa imali iitshekhi kulula ukuzibona, kodwa azingeni kwitheko. Kodwa ingaphezulu kwekhaya elilungileyo lezipho- nokuba yinqabileyo okanye iklasikhi, iidiliya okanye ezangoku, ibhokisi yekhadi lomtshato lulongezo olugqibeleleyo kwitafile yesipho sakho. Khetha ibhokisi yamakhadi omtshato (okanye ityesi okanye ipiata — ewe, ngokwenene!) Ebonisa ubuntu bakho, ifane nendlela yakho yokwamkela kwaye inegumbi elaneleyo lokugcina zonke izipho zabathandekayo bakho kunye neminqweno emihle. Uqala ngaphi? Ivenkile okanye i-DIY enye yezi ngcinga zekhadi lomtshato ezinobuchule ulwamkelo lwakho .
1. Isutikheyisi yeVintage
Ukuphosa umtshato we-retro okanye oya kuyo? Guqula isutikheyisi yeediliya (okanye yeediliya-ephefumlelweyo) kwibhokisi yekhadi lomtshato.
Thenga le bhokisi yemibono yomtshato:
Isuka: Umtshato oLula weGadi eTipp City, eOhio
2.I-Dapper Piñata (enomnqwazi ophezulu)
Cela iindwendwe ukuba ziphose iimvulophu kwikhadi lomtshato piñata elinobuntu bokwenyani. Wena neqabane lakho ninokwaphula lo mfo mncinci nivule kunye-thethani ngombono wokwamkela ulonwabo.
Ikhadi monster piñata ($ 45)
Isuka: Umtshato weZiko laseKimmel ePhiladelphia, ePennsylvania
3. Ibhokisi yeposi ebhalwe ngeKhadi
Unayo iposi-okanye ubuncinci, uya kuyisebenzisa ukuba usebenzisa ibhokisi eneleta njengekhadi lomtshato.
(ukusuka kwi- $ 50)
Isuka: Umtshato wasentwasahlobo wasemazantsi eThompson, Georgia
4. ICandelo lokuHanjiswa kweeBhayisikile eliPhakanyisiweyo
Zama ukugcina iimvulophu zabanqwenela kakuhle kwifenitshala ebuyiselweyo. Uphawu 'lwamakhadi' luya kuyenza icace injongo yesiqwengana.
Amakhadi omtshato ($ 7)
Isuka: Umtshato weVintage waseRoma eLoomis, eCalifornia
amanyathelo okutshintsha igama lakho lokugqibela
5. Isitshisi esincinci esincinci
Ibhokisi yomtshato wesitayile esine-terrarium ifanelekile ngaphandle komtshato wegadi. Kwaye siyathanda ukuba ungazibona njani zonke iinowuthsi ezifakwa ngaphakathi.
Ibhokisi yekhadi yeglasi ($ 49)
Isuka: Umtshato wangaphandle weRustic eWoodbridge, eOntario
6. Intaka yeentaka
Sithanda igolide elula okanye intsimbi yomnini wekhadi lomtshato wekhadi lomtshato.
Isuka: Umtshato waseRustic ongaphandle eShelbyville, eKentucky
imitya yomtshato eyahlukileyo yamadoda
7. Ibhokisi yeLego enemibala
Ulibale ii-monograms ezishicilelweyo-yenza ibhokisi yemvulophu yomtshato wakho wenze iLegos.
Ibhokisi yokugcina iLego ($ 30)
Isuka: Umtshato weChic Chic eMlambo iVale, eNew Jersey
8. Ibhokisi yeZipho e-Moss
Ibhokisi yamakhadi omtshato erustic igutyungelwe kwi-moss yokwenyani yokujonga okwenyani. Yigcine iyindalo okanye uyijike ngebhanti emhlophe entle kunye ne-calligraphed monogram (njengoko besenzile esi sibini).
Ibhokisi yamakhadi kaMoss ($ 49)
Isuka: Umtshato wesiNtu wothando eBaltimore, eMaryland
9. Iibhokisi zePacker-Mâché Hat eziQokelelweyo
Iibhokisi zeminqwazi zodidi lukhetho olunobuchule kunye nolungalindelekanga. Kwaye asiphambani ngokuba le bhokisi yamakhadi omtshato iqokelelweyo inoluhlobo olufana nekhekhe lomtshato.
Iseti yebhokisi yomnqwazi (ukusuka kwi- $ 41)
Isuka: Umtshato oMnandi oHanjelwe eNewport, eRhode Island
10.Ibhokisi yeRekhodi engangxengwanga (kunye neeleta zomthi)
Ukucela iindwendwe ukuba zabelane nawe ngeeresiphi zabo abazithandayo? Benze ukuba bavele iimfihlo zabo zokupheka (kunye neemfihlo zomtshato) kwibhokisi yamakhadi amnandi njengale.
Ibhokisi yokupheka ngomthi ($ 25)
Isuka: Umtshato weRustic Glam eBenton Harbour, eMichigan
11. Ibhasikithi yePikniki yeVintage
Ngaba ufuna ukufumana ubomi obungaphezulu kwintyatyambo yakho yentombazana? Yibuyise kwakhona njengebhokisi yamakhadi esipho somtshato kwindawo yolwamkelo. Kwaye, hee, ungade ubanike ubomi besithathu kwaye uyisebenzisele iipikniks ezisandul 'ukutshata.
(ukusuka kwi- $ 11)
Isuka: Umtshato osondeleyo ePittsburgh, ePennsylvania
12. Indlu yentaka yesiqhelo
Indlu yamakhadi etshintshelwe kwibhokisi yamakhadi ngumtshato ongazange wazi ukuba uyawufuna-amanqaku ebhonasi ukuba ajongeka njengekhaya lakho elisandul 'ukutshata (okanye nendawo yakho yomtshato).
Ibhokisi lekhadi indlu yendlu ($ 179)
Isuka: Umtshato wokuya eGrand Rapids, eOhio
Izithembiso zokuthembisa izibini ezikwishumi elivisayo
13. Ikhreyithi yesoda yakudala
Uthando lwezinto zakudala? Iindaba ezimnandi: Into oyithandayo uyinika inkuthazo yebhokisi yomtshato.
Ikreyiti yesoda yeediliya ($ 45)
Isuka: Umtshato waseBritish-waseMelika eBrooklyn, eNew York
14. I-Vintage Milk Cooler
Ibhokisi yobisi ye-rustic-chic lolunye uluvo lweediliya esizithandayo-ngakumbi kumtshato wefama. Ukuba awufuni ibhokisi yobisi, kodwa usafana nenkangeleko yentsimbi ebunjiweyo, zenzele i umgqomo wesiko ($ 26) ngenkangeleko efanayo endaweni yoko.
Ibhokisi yobisi lweediliya ($ 64)
Isuka: Umtshato waseRustic kwiWebhu yeNtaba, eNew York
15. Ibhokisi yeMali eKhiweyo
Kukho iindlela ezingapheliyo zokwenza ibhokisi yomtshato yelaphu. Ukuba uziva unamaqhinga, yenza eyakho-kungenjalo, unokufumana iibhokisi zelaphu ezintle zokuthenga.
Ibhokisi yekhadi yengubo ($ 20)
Isuka: Umtshato ongaphandle eAustin, eTexas
16. Ibhokisi ye-Acrylic ecacileyo eneLogo yakho yoMtshato
Sincoma isipho somtshato se-acrylic kunye nebhokisi yamakhadi yomnyhadala, wale mihla.
(ukusuka kwi- $ 80)
Isuka: Umtshato wangaphandle weFestive eAustin, eTexas
17. Ibhasikiti ye-DIY Boombox
Bhiyozela umdla wakho owabelana ngawo ngomculo ngebhokisi yemvulophu yomtshato.
Ibhokisi enekhadi lomculo (ukusuka kwi- $ 65)
Isuka: Umtshato wama-80s-Umxholo eAustin, eTexas
18.Ibhokisi yeenkuni elula enezixhobo zesiko
Akukho nto ixhaphakileyo njengebhokisi yomtshato wekhadi lomtshato. Ungayibhalisa nangona uthanda ngayo: ngomhla wakho womtshato, ii-initials, i-monogram entsha kunye nokunye.
(ukusuka kwi- $ 20)
Isuka: Umtshato waseCape Cod woMtshato oseChilmark, eMassachusetts
UBridget Clegg wenze igalelo ekunikeni ingxelo yeli nqaku.
Ixabiso eliqhelekileyo lokunxiba umtshato ngo-2016
I-faux shiplap plailing
phawu amanzi osemqoka
Umama noonyana iingoma zomtshato
Iikhompyuter zesimemo somtshato simahla
iziqithi zasekhitshini iibhari zesidlo sakusasa
utshata njani eMinnesota